Yini inkontileka yokutholwa kwezilwane? | Amakati kaNoti
Lapho sizokwamukela isilwane, ngaphambi kokusiyisa ekhaya, bazosenza sisayine isivumelwano sokutholwa. Lo mbhalo unemvume esemthethweni futhi uzoba wusizo olukhulu, kokubili kumamukeli nasendaweni yokukhosela izilwane kuze kube manje eyayinakekela leyo enoboya. Kepha, Yini ngempela?
Uma ungabaza ngalesi sihloko futhi ungafuni ukumangala, lapho-ke ngizozama ukuzixazulula zonke 🙂.
Isivumelwano sokutholwa yi- idokhumentari esemthethweni futhi ebophayo ukuthi bobabili umvikeli kanye ne-adopter sign ngesikhathi isilwane samukelwa. Izwakalisa izivumelwano esezifinyelelwe, njenge:
Imali yokutholwa okufanele itholwe ngumuntu wokutholwa
Isimo sempilo yezilwane
Ukuzibophezela komtholi, njengokuletha isilwane uma singeke sikwazi ukusinakekela, yazisa uma siguqula ikheli laso futhi sisinakekela kahle
Ngakho-ke kungumbhalo obaluleke kakhulu, ngoba okulindelekile ukuthi isilwane sizophelela ezandleni ezinhle hhayi kulezo ezingekho. Ngale ndlela, kugwenywa ukuthi kugcine kushiywe noma kusetshenziselwe ezinye izinhloso ezingavunyelwe, njengokufuya.
Noma kunjalo, Ukuze isebenze ngempela, yonke imininingwane yokuvikela kufanele ifakwe (I-CIF; ihhovisi elibhalisiwe, inombolo yokubhalisa yenhlangano), umazisi womzali kanye nekheli lakhe, kanye izinhlangothi zombili kufanele zisayine. Ngokunjalo, kunconywa ukuthi kanye nenkontileka kuhanjiswe umbiko wezilwane noma ikhadi lokugoma eliqinisekisa isimo sempilo yesilwane.
Noma kunjalo, singathatha umngane wethu omusha siye naye ekhaya futhi simnakekele ngendlela efanele. Vele, kufanele sazi ukuthi uma siyiphatha kabi, singayinaki noma singayitheni kungakapheli isikhathi esinqunyiwe, umvikeli unelungelo elisemthethweni lokuphinda alulame.
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Ukwamukelwa » Yini inkontileka yokutholwa kwezilwane?
Wazi kanjani ukuthi ikati lizokufa yini
Ungabeka kuphi i-feeder yekati?